ရက်သတ္တပတ်၏ Netflix ၏ရုပ်ရှင်ရွေးချယ်မှု - နာတာရှည် - အသစ်: Dope အသစ် - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
ရက်သတ္တပတ်၏ Netflix ရုပ်ရှင် Pick: နာတာရှည် - ကွန်း - အပိုင်း ၄၂၀: အသစ်သော Dope
ရာသီ (၁၁) မှာအမြဲနေသာ netflix ပါ
ရက်သတ္တပတ်၏ Netflix TV Show ကိုရွေး: Bob ရဲ့ဘာဂါ Daredevil ရာသီ ၂ - အပြစ်ပေးသူ၏ပုံပေါက်ကြားထားပုံ။ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် က Bryce Olin လွန်ခဲ့သော5နှစ်က @bryceolin ကိုလိုက်နာပါ
ရက်သတ္တပတ်၏ Netflix ရုပ်ရှင်ရွေးချယ်ခြင်း - သြဂုတ် ၉-၁၆
ဒါဟာများအတွက်နှေးကွေးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ဖြစ်ခဲ့သည် Netflix သြဂုတ်လအစအ ဦး ၌အချို့သောကြီးမြတ်ခေါင်းစဉ်ထည့်သွင်းပြီးနောက်။ ဒါကြောင့်ဒီရက်သတ္တပတ်၏ Netflix Movie Pick ၏အပတ်စဉ်အတွက်၎င်းသည်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲရန်နှင့် Doug Benson ၏ Comic-Con မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်အတူသွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ နာတာရှည် -con: အပိုင်း 420: တစ် ဦး က New Dope !
ဆက်စပ်: Bob ရဲ့ဘာဂါ ရက်သတ္တပတ်၏ Netflix တီဗီ Pick ဖြစ်ပါတယ်
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မှာတော့ Benson Morgan Spurlock ရဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် spoofs Comic-Con: အပိုင်း ၄ - မျှော်လင့်ချက်အသစ် ။ ဆိုလိုတာကတော့ Benson ကကျွန်တော်တို့ကို San Diego Comic-Con ကိုကြည့်ပြီးစူပါစတား၊ လူရွှင်တော်၊ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးအပိုဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့မျက်လုံးတွေကတဆင့်ကြည့်ပါတယ်။ Kevin Smith၊ Joe Rogan နှင့် Patton Oswalt တို့သည်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွင်ပါ ၀ င်သည်။
Netflix ရှိ Helvetica မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကလား။
Netflix တွင် Cassie Stoddart မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရှိပါသလား။
Netflix၊ Hulu နှင့်အခြားအရာများအတွက်လွှင့်ရန် Fyre ပွဲတော်နှင့်ကမ်းခြေမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကောင်းများ
Benson ရဲ့ Morgan Spurlock မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် spoofing အားဖြင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဂိမ်းအတွက်အတော်လေးသက်ရောက်မှုကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က Spurlock သည်တစ်နေ့လျှင်နေ့စဉ်အစာတိုင်းအတွက်မက်ဒေါ်နယ်ကိုစားခဲ့ပြီးသူ၏မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အတွက်ရိုက်ကူးသည်ကိုသင်သတိရလိမ့်မည် ငါ့ကိုစူပါအရွယ်အစား ။ နောက်ပိုင်းတွင် Benson သည်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် စူပါအမြင့် အခြေခံအားဖြင့် Benson သည်တစ်လလုံးသောက်သုံးသည့်အိုးဖြစ်သည်။
သင်ဟာ Benson ပန်ကာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဟာသင် Netflix မှာရှာနေတဲ့အတိအကျဖြစ်လိမ့်မယ်။ တစ်နာရီသာကြာသောကြောင့်ဘင်ဆင်၏အခြားအလုပ်အချို့ကိုလည်းသင်စစ်ဆေးနိုင်သည် စူပါအမြင့် , Doug မင်းဆက် နှင့် အစဉ်အဆက် Rolled အကြီးမြတ်ဆုံးရုပ်ရှင်။
ရာဇပလ္လင်ဂိမ်း netflix သို့လာလိမ့်မည်
အကယ်၍ ထိုရုပ်ရှင်များသည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာနှင့်မကိုက်ညီပါက Netflix ရှိအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀ တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်ကိုစစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ။ Netflix အပေါ်အကောင်းဆုံးဟာသ နှင့်အခြားကြီးစွာသောရွေးစရာများအတွက် Netflix ကအပေါ်အကောင်းဆုံးတီဗီ 50 ပြ!
နောက်တစ်ခု:Netflix တွင်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀ နောက်တစ်ခု:Netflix အပေါ်အကောင်းဆုံးဟာသ
ဗန် helsing ရာသီ3netflix လွှတ်ပေးရန်နေ့
ဒိုင်းလွှားကိုရာသီ Netflix အေးဂျင့် 3
ရာသီ၏ရာသီ 8 netflix ပေါ်ထွက်လာပါဘူး
ရာသီ2Premiere ၏ည
netflix daredevil ရာသီ2သွန်း